Where Vanoshandisa The Best Cities For Foodies In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Where Vanoshandisa The Best Cities For Foodies In Europe
Chikafu chakadaro mbiri, kunyanya chikafu chinonaka. Zviri nyore chaizvo kuti kupenga kana kugara Europe anokupa chikonzero zvikuru nokuti! The yakanakisisa maguta Foodies vari Europe, kuvimba isu tiri foodies uyewo, uye naizvozvo iwe paunenge kuburikidza ne Blog ichi! Just, verenga nokungwarira.
Heunoi Kusarudzwa zvakanakisisa maguta foodies mu Europe kuti unogona kusvika nechitima:
Munhu wose anoziva kuti zvino - kana muri Europe pasi rudo, uri kuenda France. Little hauna kuziva kunyange kuti uri kuenda France kunaya rudo eateries ayo, naizvo! Munyika inozivikanwa ayo kuda zvokudya uye kugadzirira nayo, zviri oma achida nzvimbo waunofarira kumabiko. Usambozvifurira, Zvisinei – Lyon mumwe romuFrance pamusoro Foodie nzvimbo kuongorora! Our rutsigiro: Sliced ​​salami rosettes akashanda yakachena girini cornichon mufushwa uye machipisi. Lyon hwakabatana pamwe Switzerland rails saka unogona nguva dzose mifananidzo inokukurudzira kuti ichi "chokoreti nyika"Chive kudya pedza.
WekuLyons anowana mukati chinzvimbo chedu Best Cities kuti Foodies mu Europe nokuda kwayo chokoreti pezvinofadza uye zvakawanda.
Brussels kuenda kuLyon Highspeed Chitima
The vava kungotaura nezvekudzoka Guta Vienna ndiko kwaunoenda nokuda yakanakisisa chokoreti keke mu Europe - Sachertorte. Rich muzvavanoda, kwasviba uye zvakadzama, Nechikonzero ichi, keke yedu nyanzvi paakavapa Austria kuva mumwe Best Cities kuti Foodies mu Europe. saka kwokuwana mumwe? In chero Vienna kuti kofi dzimba! Ndiyo nyika siginicha keke, uye veko nechokwadi unoziva kuti saka.
CHERECHEDZA: Snap ane mapikicha shoma muguta uye zvokudya zvavo panguva ikoko – uchida kuti Instagram chenyu ngachivhenekere, regai Ya?
San Sebastian, Speini
Kana uchinzwa sokuti kurova zvose zvakanakisisa mapato muguta, chete adye kubva muSan Sebastian! Kuva akatendeseka, unogona kudya tapas zvapo Spain, uye imi muchava usaida. ASI, kuwana BEST OF THE BEST, edza muguta rino pagungwa. Chii chinoita nzvimbo ino saka chinokosha ndiko kunonyanya kuwanda siyana uye artistry unogona kusarudza kubva. Spicy uye anovava, inopisa uye kutonhora, ichiitirwa uye akaoma, zvose kuti kuwanikwa rimwe bhawa. Edza mashoma zvidimbu nerimwe panzvimbo chamunoona. Iwe unenge uzere, asi zvinenge zvakakodzera.
Ehe, Chitima chikafu kunogona kuva zvinoshamisa asi kwete kunyange yakanakisisa chitima chikafu chingaenzana Copenhagen raMwari Noma! ndiye bhikoni kuti Nordic chikafu, uye unofanira kuita zvose zvaunogona kuti uende kutarisa kuti kunze. Haangorina uyu ndiye mumwe Best Cities kuti Foodies mu Europe, eatery anga ari iye Kwete. 1 nzvimbo pamusoro San Pellegrino pryslys kwemakore! Ehe, mutengo marefu, asi manakiro chauri kuwana zviripo. Kana uchida mifananidzo inokukurudzira pamusoro kuna dzekuma Scandinavia nechitima, Copenhagen iguru suo chemabhazi yokuita izvozvo.
Bonn kuna Copenhagen Zvitima
MuFrankfurt kuna Copenhagen Zvitima
isu chidhindo yedu runyorwa rweMaguta Akanakisa eFoodies neTrieste, Itari
Hatigoni kunyora pamusoro Best Cities kuti Foodies muEurope pasina ataura ose deliciousness ose Itari. Well ... kwete zvose asi vamwe.
Trieste vaiva hweAustria-Hungary kusvikira Hondo Yenyika I. Izvi pano chaipo chinowedzera zvinorehwa richinaka madhishi Trieste raMwari. Sei? Nekuti nhoroondo Trieste akasiya wandei inobatsira pamaitiro ayo chili. Atypical ye zvemo Italian madhishi, Trieste prides yakadaro shamisa combos ose Pasta uye Pizza pamwe sauerkraut uye sliced ​​soseji, uye zvakafanana. Nakidzwa Vakamupfekedza chikafu, creamy chokoreti, uye chinoshamisa kofi muguta umo James Joyce akatanga kunyora Ulysses. A hunoshamisa maonero mhiri Adriatic hazvizorwadzisi yenyu kwokushumba, kana. Kubatana pakati Italy uye Slovenia akakwana rails, saka unogona kupa Slovenia mukana vari munharaunda.
KuGenoa kuna Trieste Zvitima
History, chikafu, uye Europe nguva dzose zvinofambirana, uye iwe ikozvino mukana kuongorora zvose chaizvo nyore. pinda Kuponesa Train kutenga muzviitire njanji tikiti uye kutanga kwako Foodie ushingi nhasi!
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / ja kuti / von kana / kes uye mimwe mitauro.
#traveleurope chikafu Foodie foodies Train Travel